Sida loogu kasbado kalsoonida macaamiisha suuqgeyn loo dhan yahay | BehMaster
Bogga ugu weyn/Content Suuq/Sida loogu kasbado kalsoonida macaamiisha suuqgeyn loo dhan yahay
Sida loogu kasbado kalsoonida macaamiisha suuqgeyn loo dhan yahay
"Maalin walba waxaan wax badan ka baraneynaa muhiimada matalaadda alaabta iyo khibradaha," ayuu yiri Kelli Kemery, oo ah madaxa cilmi-baarista suuqa ee Microsoft, iyada oo soo bandhigtay SMX Next. "Suuq gaynta loo dhan yahay waxay ka caawisaa summadaada inay si dhab ah ugu xidhmaan macaamiisha si ay u wadaan, jacayl, daacadnimo iyo aaminaad."
In kasta oo shirkado badani ay mar u arkeen ka mid noqoshada inay tahay ikhtiyaar ikhtiyaar u ah ololehooda suuq-geyneed, waxaa caddaatay in macaamiishu ay ka rabaan bartamaha isdhexgalka summada. Iyo sabab wanaagsan - qaadashada dhaqamada suuqgeyneed ee loo dhan yahay waxay ka caawisaa summadaha inay gaaraan kuwa ay ka tageen.
Xigasho: Kelli Kemery
"Suuq gaynta loo dhan yahay waxay ku martiqaadaysaa dadka aan la soo jeedin iyo kuwa la haybsooco inay la kulmaan oo ay si dhab ah ugu xidhmaan astaantaada," ayuu yidhi Kemery. "Waxay kor u qaadaa codadka iyo sheekooyinka kala duwan, su'aalaha malo-awaalka iyo eexda waxayna ka fogaataa fikradaha qaldan."
Ku darida waa "lagama maarmaan suuqgeyn casri ah," ayay tiri, iyo noocyada ku guul darreystay inay qaataan suuqgeyn loo dhan yahay waxay heli doonaan in laga tago marka ay isbeddelladani sii socdaan. Halkan waxaa ah afar fal oo uu Kemery kula talinayo suuqgeynayaasha inay sameeyaan si ay ugu abuuraan dhaqamo loo dhan yahay ololahooda.
Ku wad ujeedka wax iibsiga oo leh xayaysiis loo dhan yahay
Kemery waxay tilmaantay qaar ka mid ah tijaabooyinka ay samaysay si ay u go'aamiso haddii xayaysiisyada loo dhan yahay ay kordhiyeen ujeedada wax iibsiga. Cilmi-baadhistan, kooxdeedu waxay ogaatay inta ay le'eg tahay ujeeddada ay sida tooska ah u wadaan curiyeyaasha loo wada dhan yahay.
Tusaalooyinka xayaysiisyada loo dhan yahay. Xigasho: Kelli Kemery
"Xayeysiiskii ugu horreeyay wuxuu dareemay hoyga si caadi ah, moodelku wuxuu ahaa mid lagu aqoonsan karo xayeysiiska waxaa loo tixgeliyey mid aad u qurux badan," ayuu yiri Kemery. "Xayeysiiska labaad wuxuu ahaa mid soo jiidasho leh sababtoo ah waxay dareemaysay run. Shakhsiyaadka waxay dareemeen inay ku xidhan yihiin sidii qoys. Laakiin tan ugu muhiimsan, dadku waxay xuseen sida xayeysiisku u muujiyay kala duwanaanshiyaha iyo markii la waydiiyay xayeysiinta ugu badan ee loo dhan yahay, tani waxay ahayd guusha cad."
Kooxda Kemery waxay u isticmaaleen natiijooyinkan si ay u horumariyaan tilmaamaha ka mid noqoshada summadaha. Laakin waaxaha suuq-geynta iyo xayaysiinta ayaa lagu dhiirigeliyaa inay horumariyaan qaab-dhismeedkooda si ay u beddelaan ololahooda.
Abuur istaraatijiyad ereyga muhiimka ah oo loo dhan yahay
Isku darka waa in lagu dabaqaa ereyada furaha ah ee ay isticmaalaan sidoo kale. Kuwani waa ereyada dhagaystayaashu - kooxaha la haybsooco - gaar ahaan - ay isticmaalayaan si ay u helaan calaamado ay ku kalsoon yihiin, .
"Bartilmaameedka macaamiisha suurtagalka ah ee ku salaysan baahidooda taas oo khariidad u samaynaysa ereyada muhiimka ah ee ay isticmaalaan si ay u qanciyaan cabbirkooda gaarka ah ee kala duwanaanta," ayuu yidhi Kemery. "Tusaale ahaan, bulshada LGBTQ, marka ay raadinayso inay ka soo iibsadaan alaabada ama adeeg kasta, waxay u janjeeraan inay isticmaalaan weedha 'saaxiibtinimo-khaysi' sidii beddele. Weedhan gaarka ah waxa loo isticmaali karaa wakiil ahaan si looga caawiyo dadaalkaaga shakhsiyaynta fariimaha ama adeegyada bulshadan.
"Suuqley ahaan, shaqadeenu waa inaan soo bandhigno fikradahan gaarka ah ee dhegeystayaal kala duwan iyo safarradooda go'aannada macaamiisha ee gaarka ah," ayay raacisay.
Liiska ereyada muhiimka ah ee loo dhan yahay. Xigasho: Kelli Kemery
Tilmaamaha ku saleysan luqadda ayaa aad ugu wanaagsan dhisida kalsoonida dhageystayaasha, sidaa darteed waxaa muhiim ah in la xasuusto inaad ku darto ereybixin loo dhan yahay liisaskaada muhiimka ah.
"Kuwaan waxaa si dhab ah loogu isticmaali karaa koobiga xayaysiiskaaga, xayaysiintaada, ama waxa ku jira si ay gacan uga geystaan ​​gudbinta ku darida," ayuu yiri Kemery.
Samee istaraatijiyad sawir loo dhan yahay
"Matelaadda dhabta ah ee xayeysiinta waa muhiim. Sawirrada aad dooratay waa arrin,” ayuu yiri Kemery. "Cilmi-baadhisteenna, waxaan ku ogaannay inuu jiro xiriir xooggan oo u dhexeeya kalsoonida, jacaylka iyo daacadnimada. Marka kalsoonida loo sameeyo aasaas ahaan, calaamad waxay bilaabi kartaa inay dhisto jacayl iyo daacadnimo.
"Si tan loo sameeyo, calaamaddu waa inay tagtaa mayl dheerad ah si ay qof u dareento in la fahmay iyada oo loo marayo ka mid noqoshada, taasina waxay la macno tahay sawir dhab ah," ayay raacisay.
Sawiradu waxay aad ugu fiican yihiin kicinta dareenka si loo xoojiyo kalsoonida macaamilka ee sumaddaada. Isticmaalka sawiro loo dhan yahay waxay badin kartaa qodobkan kalsoonida, keenista dhagaystayaal badan iyo dhisida xiriir adag iyaga.
"Doorashada sawiradu waa qayb muhiim ah oo ka mid ah dhisidda waayo-aragnimada macaamiisha oo macno leh oo loo dhan yahay," ayay tidhi. "Summadaha loo wada dhan yahay ma rabaan oo kaliya inay dadka gaaraan, waxay rabaan dadka inay arkaan in astaanta loo dhisay iyaga."
Baro beegsiga dhagaystayaasha loo dhan yahay
"Iyada oo loo marayo cilmi-baarista macmiilka ee aad sameyso si aad si fiican u fahamto qiyamka macaamiishaada oo aad u baarto xeeladaha ereyada muhiimka ah ee loo dhan yahay, ujeedadu waa in la kashifo daawadayaasha laga yaabo inaad ilowdey," ayuu yiri Kemery. "Waa lama huraan inaad fahamto aragtida dhageystayaasha ee mid ka mid ah aaladaha aad isticmaasho."
"Waxaad u isticmaali kartaa fikradahan si aad u heshid habab aad si dhab ah ugu suuq gayn karto daawadayaasha gaarka ah kuwaas oo tilmaamaya sifooyin sare sida qiimeynta wax ku biirinta bulshada, iyo shakhsiyaadka inta badan raadiya calaamado ku lug leh bulshadooda sidoo kale," ayay raacisay.
Isticmaalka ku darida bartilmaameedka dhagaystayaasha. Xigasho: Kelli Kemery
Dhisidda dhagaystayaal iyadoo loo marayo dhaqamo loo wada dhan yahay waa hawl firfircoon - suuqlaydu waxay u baahan yihiin inay fikrado ka helaan goobo iyo suuqyo kala duwan si ay u arkaan bulshooyinka ay dayacanayaan. Ololaha balaadhinta habkan ayaa muujinaya kooxahan sumaddaadu inay danayso iyaga.
Kemery wuxuu sii iftiimiyay doorka suuqgeynta loo wada dhan yahay uu ku leeyahay dhisida cilaaqaad waara oo lala yeesho macaamiisha: “Habka mas'uulka ah, qiyamka ku saleysan iyo habka loo wada dhan yahay ee suuqgeyntu maaha kaliya in la beegsado qaybaha niche, bixinta qiimaha alaabta ama qaybaha siyaasadda. Waxay ku saabsan tahay dhisidda xidhiidh dhab ah oo lala yeesho dadka u dabbaaldegaya kala duwanaanta iyo waayo-aragnimada aadanaha ee ballaaran. Ku darida ulakaca leh ujeedo loo tolmoonayo inta lagu jiro khibradaada sumadda waxay keentaa dareenka aqbalaadda, qanacsanaanta, kalsoonida, hubaal, rajo iyo badbaadada."
Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato Cloudflare ee SEO
Dejinta Ololaha ugu sarreeya ee Waxqabadka Google